राम्री तरुनी पुरुषहरुसँग पछी लाग्दैमा मख्ख नपर्नुस……. – Khabar Patrika Np
राम्री तरुनी पुरुषहरुसँग पछी लाग्दैमा मख्ख नपर्नुस…….
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०३, २०७७ समय: १६:२९:४१
काठमाडौं उपत्यकामा ठ’गी, लुट’पाट तथा पकेटमा’रीमा संलग्न महिलोको गि’रोह पक्राउ परेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका १४ कलंकीबाट दुई जना महिला पाकेटमा’र पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ, गोंगबु ११ की २४ वर्षीया सम्झना परियार र सिन्धुपाल्चोक लिसंखु घर भई हाल काठमाडौँ मनमैजु बस्ने २३ वर्षीया सिर्जना उप्रेती रहेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी प्रभाग कंलकीका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक मिठ्ठु खड्काले उनीहरुको साथबाट ३४ हजार ५ सय ५० रूपैयाँ समेत ब’रामद गरिएको जानकारी दिइन् । प्रहरी नायव निरीक्षक मिठ्ठु खड्काका अनुसार उनीहरुलाई पकेट मा’र्दै गर्दा नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
उनीहर पे’शेवर रुपमै ठ’गी तथा पकेटमा’रीमा संलग्न रहेको प्रहरीेले जनाएको छ । पुरुषहरुसँग नजिकिने र उनीहरुले पाकेट मा’र्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। केहीलाई उनीहरुले ठ’गी समेत गरेका थिए ।